Caruur Abaar iyo biyo la’aan ugu geeriyootay Ceel-waaq – SBC
Caruur Abaar iyo biyo la’aan ugu geeriyootay Ceel-waaq
Caruur aad u da’yar ayaa lagu soo waramayaa inay abaaro iyo ba’aal ugu geeriyodoeen degmada Ceel-waaq ee gobolka Gedo.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo Degmada Ceel-waaq ee Gobalka Gedo, sedax Caruur ah ayaa gaajo iyo haraad ugu geeriyootay deegaan lagu magacaabo Qul-qul shubaale oo hoostaga degmaasi islamarkaana 100-KM u jirta degmada Baardheere ee Gobalka Gedo.
Qaar ka kid ah Nabadoonada Degmada Ceel-waaq ayaa Idaacada Shabelle u sheegay in deegaankaasi ay ka jirto Abaar Baahsan islamarkaana sameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada taasina ay keentay in Cuurtaasi ay u geeriyoodaan Macluul iyo Biya la;aan.
Deegaanka Qul-qul shubaale ee gobolka Gedo ayaa ka mid ah deegaanada ugu daran ee abaaruhu ay ka taaganyhihiin, waxaana la sheegayaa in halkaasi ay ka jirto biyo la’aan xoogan.
Odayaal, waxgarad iyo nabadoono ka soo jeeda deegaanada gobolka Gedo ayaa horay ugu baaq ugu diray ganacsatada iyo jaaliyadaha Soomaalida ee ku nool dalka dibadiisa iyagoo ka codsadya inay gar gaar la soo gaaraan dadka ku dhibaataysan deegaanada gobolka Gedo